चिन्ता नगर्नुहोस् यसरी गर्नुहोस् मुटु रोग र यसको उपचार
सेप्टेम्बर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक	23 Comments डा. राम बहादुर बोहरा
मुटु रोग विश्वमा धेरै मानिसको ज्यान लिने प्रमुख रोग हो । त्यसकारण यसप्रति सावधान हुनैपर्छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयघात, कोलेस्टेरोल, युरिक एसिड आदिको समस्या निकै बढेको देखिन्छ । मुटुका धेरै जसो रोगहरू जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छन् ।
आजकल जीवनशैली व्यवस्थित छैन । अव्यवस्थित जीवनशैलीको नतिजा हो मुटुको रोग । आधुनिक सभ्यता, व्यस्त जीवन, महत्वकांक्षा, भोजभतेर, कम्प्यूटर, टेलिभिजन, अत्याधिक मानसिक तनाव, व्यायामको कमी, पैसा कमाउने दौड यी नै हुन् ।
मुटु रोग नियन्त्रणका लागि जीवन शैली व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ । सुत्ने, उठ्ने, खाने, पिउने, बानी व्यावहार, सोचाई, दिनचर्या आदि सबै जीवन शैलीभित्र पर्दछन् ।
१. छाती दुख्ने, ढक्क फुल्ने वा भारी हुने (छातीमा बेचैनी हुने वा भारीपन महशुस हुनु) हृदयाघातको मुख्य सूचकका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले यदि तपाईलाई यस्तो भइरहन्छ भने त्यसलाई हल्का रूपमा नलिनुस् । तत्कालै अस्पतालमा गएर उपचार गर्नुहोस् ।
आज मैले मुटुको रोगबाट बचाउने होम्योपैथीक औषधि Tonicard Gold Drops दिएको छु यो औषधिले कुनै प्रकारको हानी गर्दैन । यो औषधि ढुक्क साथ चलाउन सक्नुहुन्छ ।
मात्रा : २०-३० थोपा औषधि १/४ भाग पानीमा मिलाएर खान सक्नु हुन्छ ।
← गहुको जमरा र यसको सेवनका फाइदाहरू
दशैँ आउदैछ, मासु खाँदा होशियार रहनुहोस् →
फ्रेवुअरी 26, 2019 फ्रेवुअरी 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक 5
सेप्टेम्बर 14, 2018 सेप्टेम्बर 16, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
23 thoughts on “मुटु रोग र यसको उपचार”
Pingback:धेरै रोगको अचुक औषधी साइलीसिया (Silicea) – Science Infotech
Pingback:निमोनियावारे एक जानकारी
Pingback:यसरी गर्नुहोस् औषधि र अपरेशन बिनै मुटु रोगको उपचार
Pingback:अल्जाईमर रोग र यसको उपचार
Pingback:मुख बाङ्गिने रोगको प्राकृतिक उपचार
Pingback:के तपाईलाई थाहा छ यसरी गर्नुहोस् मुटु रोगको प्राकृतिक उपचार
Pingback:जान्नुहोस् ! ठूला-बडालाई हुने पारकिन्सन रोग के हो ?
Pingback:हृदयघातमा जीवनशैली परिवर्तन
Pingback:जान्नुहोस् ! हृदयघातवाट बच्न के के खानेकुराहरु खानुहुन्छ र खानुहुदैन भनेर ?
Pingback:जान्नुहोस् ! यसरी गर्नुहोस् पारकिन्सन रोगको प्राकृतिक उपचार
Pingback:यसरी गर्नुहोस् मुख बाङ्गिने रोगको प्राकृतिक उपचार
Pingback:व्यायाम र बिश्राम ब्यस्थापनद्वारा मुटु रोगको उपचार
Pingback:विचार र ब्यबहार ब्यस्थापनद्वारा मुटु रोगको उपचार
Pingback:जान्नुहोस् ! यी हुन् विश्वविख्यात ७ वरिष्ठ डाक्टरहरु
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् उपवासका फाइदाहरु र बेफाइदाहरु
Pingback:जान्नुहोस् र यसरी गर्नुहोस् मुटुको हेरचाह
Pingback:हृदयघात (Heart Attack) को बारेमा जानकारी